Barnaamijyada Qadka 2aad ee Shahaadada Injineerka Madaniga ah ee 2022
Barnaamijyada Online-ka ah ee Degree injineernimada 2 sano ah
Halkan waxaa ah wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan helitaanka shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 ee khadka tooska ah ee shakhsiyaadka doonaya inay ku kasbadaan shahaadada wadaagga ah ee injineernimada madaniga ah gebi ahaanba khadka tooska ah ee guryahooda.
Shahaadada wadajirka ah waa barnaamij 2-sano ah oo ardayda baraya inta badan ficil ahaan ama farsamo ahaan qayb ka mid ah daraasadda kahor intaan loo gudbin shahaadada bachelorka. Barnaamijka 2-da sano wuxuu ka caawiyaa laad bilaabista shaqsi shaqsiyeed goobtaas daraasadda, iyo kulliyadaha iyo jaamacadaha qaarkood waxay u oggolaadaan ka wareejinta deynta barnaamijka shahaadada jaamacadeed illaa barnaamijka shahaadada bachelor-ka.
Shahaadada 2 sano, oo sidoo kale loo yaqaan shahaadada jaamacadeed, waxay ku timaaddaa laba "baakado shahaado" maadaama ay noqon karto Associate of Arts (AA) ama Associate of Science (AS). Darajooyinkani way ka duwan yihiin shahaadooyinka bachelor-ka ee u baahan afar sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro.
Darajooyinka wadajirka ah waxaa badanaa laga helaa kuwa yaryar, bulshada, iyo kulliyadaha farsamada. Jaamacadaha qaar ayaa bixiya laakiin aad ayay uyar yihiin maadaama maamulayaasha HR qaarkood ay si dhib yar ama aan waligood u shaqaaleysiinin kuwa haysta shahaadada jaamacadeed.
Waxay doorbidaan kuwa haysta bachelor-ka iyo masters-ka, laakiin shahaadada jaamacadeed waxay inta badan ku siin doontaa xirfado aasaasi ah oo aasaasi ah waxayna kaa dhigi doontaa inaad si fiican u fahamto waxa aad baranayso markaad sii wadato waxbarashadaada isla goobtaas.
Shahaadada wadajirka ahi maahan shahaadada kaliya ee lagu dhammayn karo sanadaha 2 ee masters sidoo kale waxaa lagu dhammeeyaa sanadaha 2 ama xitaa ka yar iyadoo kuxiran jaamacadda.
1 Helitaanka Shahaadada Machadka Madaniga ee 2-sano ee khadka tooska ah
1.1 Miyaan ku kasban karaa shahaadada jaamicadeed ee injineernimada madaniga khadka tooska ah?
1.2 Miyaan ku kasban karaa shahaadada mastarka ee injineernimada madaniga ah khadka tooska ah?
1.3 Immisa ayuu sameeyaa injineer madani ah oo leh shahaadada jaamacadeed?
1.4 Maxaan ku samayn karaa laba sano oo shahaadada injineernimada ah?
2 Noocyada shahaadooyinka isuduwaha injineernimada madaniga ah
2.1 Maxay yihiin noocyada shahaadooyinka mastarka ee injineernimada?
3 7 Barnaamijyada Khadka Tooska ah ee Shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 sano ah
3.1 Jaamacadda Old Dominion University
3.1.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.2 Penn Foster College
3.2.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.3 Jaamacadda Koonfurta Queensland
3.3.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.4 Kuliyada Farsamada ee Waqooyiga Dhexe
3.4.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.5 Kuleejka Penn
3.5.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.6 Machadka Injineerinka
3.6.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.7 Jaamacadda Norwich
3.7.1 Shuruudaha Barnaamijka
3.8 Talo soo jeedin
Helitaanka Shahaadada Machadka Madaniga ee 2-sano ee khadka tooska ah
Halkan, kama hadli doonno wax kale oo 2-sano ah oo daraasad ah marka laga reebo injineernimada madaniga ah.
Injineernimada madaniga ahi waa xirfad weligeed loo baahan yahay, maadaama waddooyinka, guryaha, iyo xafiisyada, iyo kaabayaasha kaleba ay sii dhismi doonaan, injineerada madaniga ah weligood kama dhici doonaan shaqooyinka.
Tan macnaheedu waa inay mustaqbal jirto, injineerada madaniga ah ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya sida dhakhaatiirta, bayoolajiyaasha, fiisikiska, iyo kuwa la midka ah.
Shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 sano ah ee khadka tooska ah waxay ka kooban tahay koorsooyin kala duwan sida naqshadeynta farsamada dhulka, makaanikada injineernimada, sahaminta dhulka, xisaabta farsamada, khariidaynta, haadka, iyo qorista farsamada, Auto CAD, qaabeynta kaabayaasha, qalabka injineernimada, kormeerka, iyo qiyaasta, iyo waddada weyn. naqshada dhismaha.
Inta lagu guda jiro koorsooyinkan, ardayda waxaa lagu qalabeyn doonaa xirfadaha aasaasiga ah iyo qibrada injineerka madaniga ah taasoo ka dhigeysa inay u diyaar garoobaan heerka gelitaanka iyo kaalimaha maamulka sare.
Ardayda doorta shahaadada wadajirka ah, waxay u oggolaan doontaa iyaga inay si fudud ku socdaan oo ay ku kasbadaan shahaadada bachelorka isla goobtaas ama qayb kale oo daraasad la xiriirta ah.
Halka kuwa u aadaya xulashada sayidku ay si buuxda diyaar ugu yihiin shaqaalaynta shaqaalaha ayna awoodaan inay qabtaan mashruucyo adag oo adag.
Shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 sano khadka tooska ah waxay u dhigantaa iskaashatada ama shahaadada mastarka.
Kadib markaad dhamaysato shahaadadaada 2 sano ee injineernimada madaniga ah ee khadka tooska ah ee heerka daraasadda, ardaydu waxay heli doonaan Associate of Science (AS) ama Associate of Science Applied Science (AAS) halka macallinka qalin jabiyana uu kasban doono Master of Civil Engineering (MSCE) shahaadada.
Adiguba si sahal ah ayaad u bilaabi kartaa xirfad injineernimada madaniga ah adiga oo aan u marin mashquulka iyo xasiloonida caadiga ah ee helitaanka shahaadada. Iyadoo la adeegsanayo kombuyuutar ama kiniin, isku xirnaanta internetka oo deggan, iyo si fiican u akhrinta qodobkan waxaad ku kasban kartaa shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 sanadka khadka tooska ah.
Miyaan ku kasban karaa shahaadada jaamicadeed ee injineernimada madaniga khadka tooska ah?
Barashada khadka tooska ah waxay wax ka beddeshay habka dhaqameed ee waxbarashada loo bixiyo, iyadoo hal-abuurnimada aad ku baran karto xirfadda aad ugu jeceshahay ama aad ka kasban karto shahaado machad kumanaan mayl ka baxsan adiga oo aan tusin joogitaankaaga jir ahaaneed.
Marka, haddii ay tahay su'aal ah inaad ku kasban karto shahaadada jajaban ee injineernimada madaniga khadka tooska ah, markaa jawaabtu waa - HAA! Gabi ahaanba waad awoodi kartaa. Ku kasbashada shahaadadan khadka tooska ah waxay la socotaa faa'iidooyin badan oo habka dhaqanka ee barashada uusan bixin karin.
Waxaa jira arrinta dabacsanaanta, halkaasoo aad ka daawan karto muxaadarooyinka barnaamijyadaada khadka tooska ah iyo dhammaystirka shaqooyinka waqtigaaga. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sidoo kale diirada saarto howlahaaga caadiga ah, shaqadaada, iyo masuuliyadaha kale adigoon qashqashaadin jadwalkaaga.
Waxaad ku baran doontaa barnaamijyadaada injineernimada madaniga ah xawaaraha aad adigu iska leedahay. Barashada Fogaanta, oo waliba ah barashada khadka tooska ah, waxay ku siineysaa hay'ado xulasho badan leh si ay u doortaan midka ku qancinaya baahiyahaaga.
Marka, waxaad joogi kartaa meel kasta oo aad wax uga baran kartaa shahaadadaada injineernimada madaniga ah ee 2 sanadka khadka tooska ah hay'ad kasta oo aad dooratay, ha ahaato gobolkaaga iyo haddii kale. Ikhtiyaarrada barashada tooska ah ayaa sidoo kale ka raqiisan sidoo kale waxay bixiyaan koorsooyin badan oo takhasus leh.
Waxbarashada tooska ah waxay ku habboon tahay dhammaan qaab nololeedka haddii aad tahay hooyo, aabe, shaqaale, ganacsade, iwm. Waxaad had iyo jeer wax ku baran kartaa kuna qalinjabi kartaa shahaadooyin iyo shahaadooyin la aqoonsan yahay sidoo kale.
Miyaan ku kasban karaa shahaadada mastarka ee injineernimada madaniga ah khadka tooska ah?
Haa! Waxaad ku kasban kartaa shahaadada masters-ka ee injineernimada madaniga khadka tooska ah, inta ugu badan ee aad ku heli karto shahaadada internetka.
Immisa ayuu sameeyaa injineer madani ah oo leh shahaadada jaamacadeed?
Mushahar sanadle ah ama falanqeyn dakhli oo kuwa dhammeystay shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2-aad khadka tooska ah iyo xitaa dugsiga caadiga ah ayaa laga qaatay.
Falanqeyntu waxay muujineysaa in 100% shaqsiyaadka shaqeeya ee leh shahaadada iskuduwaha injineernimada madaniga ah ay kasbadaan inta udhaxeysa $ 66,900 - $ 70,370.
Maxaan ku samayn karaa laba sano oo shahaadada injineernimada ah?
Markaad haysato shahaadada injineernimada madaniga ah ee laba sano ah, waad qaban kartaa heerarka gelitaanka iyo maareynta maareynta ama ka shaqeynta berrinka kaaliye ahaan.
Jagooyinka noocan ah waxaa ka mid ah cryptographer, sahamiyaha dhulka, hawlwadeenada CAD, farsamayaqaannada carrada, kormeeraha goobta, iyo farsamo yaqaan injineernimada madaniga ah.
Kuwani waa xulashooyin xirfadeed oo wanaagsan haddii ay u dhigmaan waxa aad raadineyso, haddii aysan ahayn markaa waa inaad sii wadataa oo aad qaadataa shahaadada koowaad ama mastarka.
Darajooyinkan, waxaad ku noqon kartaa injineer madani ah oo buuxa, waxaad qaadan kartaa naqshadeynta ama jagooyinka maaraynta iyo xitaa kormeerida mashaariicda dhismaha.
Si kastaba ha noqotee, adoo ka bilaabaya raacitaanka shahaadada jaamacadeed ee injineernimada madaniga ah waxay kugu ridi doontaa wadada saxda ah ee guusha.
Noocyada shahaadooyinka isuduwaha injineernimada madaniga ah
Associate of Science (AS) ee injineernimada madaniga ah
Associate of Science Applied (AAS) ee injineernimada madaniga ah
Shahaadada wadajirka ah ee injineernimada madaniga ah waxay u baahan tahay laba sano si loo dhammaystiro, ha noqoto khadka tooska ah ama khadka tooska ah, iyo abaalmarinta laba nooc oo shahaadooyin ah; Associate of Science (AS) iyo Associate of Science Applied (AAS).
Associate of Science degree ee injineernimada madaniga waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay sii wataan waxbarashadooda oo ay ka helaan BSc isla goobta jaamacad.
Barnaamijyada injineernimada madaniga Associate of Science (AS) badanaa waxay u baahan yihiin 60 saacadood oo deyn ah oo ay ku jiraan koorsooyinka waxbarashada guud iyo injineernimada madaniga ah.
Halka Associate of Applied Science degree ee injineernimada madaniga ah loogu talagalay shakhsiyaadka doonaya inay bilaabaan inay u shaqeeyaan injineerada madaniga ah ama jagooyinka la xiriira sida injineerada sahaminta, injineerada dhismaha, iwm. Barnaamijyada halkan sidoo kale waxay u baahan yihiin inta udhaxeysa 60 iyo 65 saacadaha deynta si ay u dhamaystiraan.
Maxay yihiin noocyada shahaadooyinka mastarka ee injineernimada?
Markaad qalin jabiso mastar, waxaad kasban kartaa Master of Science in Civil Engineering (MSCE) ama Master of Science ee Madaniga iyo Deegaanka (MSCEE).
In kasta oo injineerada madaniga ahi diiradda saaraan horumarinta qaabab kala duwan sida waddooyinka, dhismayaasha, iyo garoomada injineerada injineernimada waxay horumariyaan mashaariic ka caawin kara xallinta arrimaha deegaanka.
Si kastaba ha noqotee, labaduba waxay daboolayaan afarta qaybood ee ugu muhiimsan ee injineernimada madaniga ah kuwaas oo ah; Gaadiidka, Qaabdhismeedka, biyaha, iyo Injineeriyada cilmiga cilmiga xoolaha.
7 Barnaamijyada Khadka Tooska ah ee Shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 sano ah
Jaamacada Old Dominion ee Barnaamijka 'Online Online Degree Degree Engineering Engineering'
Kulliyadda Penn Foster College 2-sano Barnaamijka Barnaamijka Shahaadada Machadka Madaniga ah
Jaamacadda Koonfurta Queensland Barnaamijka Cilmiga Machadka Shahaadada Madaniga ah ee 2 sano ah
Kulliyadda Farsamada ee Waqooyiga Dhexe 2 sano Barnaamijka Degree ee Machadka Madaniga ah
Kuliyadda Penn Kulliyadda Barnaamijka Shahaadada Machadka Madaniga ee 2 sano
Machadka Injineeriyada ee Teknolojiyada Barnaamijka Barnaamijka Online Degree Degree Injineeriyada Rayidka ah
Jaamacadda Norwich University Barnaamijka Shahaadada Machadka Madaniga ah ee 2 sano ah
Waa kuwan hay'adaha ugu sarreeya ee bixiya shahaadada injineernimada ee sanadka 2 khadka tooska ah. Isqorista barnaamijka shahaadada jaamacadeed waxay kuu diyaarin doontaa inaad ka qalin jabiso dugsiga sare si aad uga shaqeysid cilmiga injineernimada.
Waxay sidoo kale u diyaarin doontaa ardayda inay sii wataan waxbarashadooda maadada laga bilaabo bachelor-ka ilaa heerka daraasadda ee mastarka.
Qaar ka mid ah hay'adaha waxay u oggolaanayaan wareejinta amaahda koorso shahaadada koowaad ee bachelor-ka ee injineernimada madaniga ah ama qaybta la xidhiidha.
Isqorista barnaamijka sayidku waxay kor u qaadi doontaa aqoontaada goobta waxay kaa dhigeysaa qalinjabis qiimo leh oo qiimo leh oo diyaar u ah inaad ka shaqeyso hay'ad kasta oo la xiriirta daraasadda.
Xirfadahaaga xirfadeed, waxaad awood u yeelan kartaa inaad si hufan u kormeerto una fuliso mashaariicda dhismaha ee ugu sarreeya macaamiisha.
Jaamacadda Old Dominion University
Jaamacadda Old Dominion waxay bixisaa shahaadada 2 sano ee injineernimada madaniga ah ee heerka qalin-jabinta ardayda abaalmarinta Master of Science ee injineernimada madaniga ah.
Barnaamijka masters-ka wuxuu diiradda saarayaa injineernimada xeebta, halkaas oo aad ku baran doonto inaad wax cusub soo kordhiso maaddaama aad tikniyoolajiyad ku dabaqeyso horumarinta iyo abuurista kaabayaasha dhaqaalaha.
Barnaamijku wuxuu u baahan yahay 30 saacadood oo deyn oo koorso ah oo ay ku jiraan 6 saac oo deyn ah oo loogu talagalay qoraalka.
Si aad u dalbato barnaamijkan, waxaa jira shuruudo gaar ah oo aad u baahan tahay inaad ka gudubto.
Waa inaad haysataa shahaadada bachelorka ee injineernimada ama cilmiga jirka oo leh ugu yaraan GPA ee 3.0.
Codsadeyaashu waa inay sidoo kale lahaadaan aqoon ku filan injineernimada injineernimada (istaatikada, firfircoonida, makaanikada dareeraha, makaanikada ciida, xoogga qalabka, iwm.) Heerka shahaadada koowaad.
Codsadeyaasha afkooda koowaad uusan aheyn Ingiriis, waa inay qaataan TOEFL ama IELTS oo ay soo gudbiyaan dhibcaha imtixaanka.
Codsadayaasha haysta shahaadada injineernimada ABET ee la aqoonsan yahay looma baahna inay soo gudbiyaan GRE
Dadka ku nool gobolka - $ 551 saacaddii amaahda
Ardayda ka baxsan gobolka - $ 595 saacaddii amaahda
Kuleejka Penn Foster wuxuu bixiyaa shahaadada 2 sano ee injineernimada madaniga ah ee khadka tooska ah ee heerka daraasadda iyadoo diiradda la saarayo tikniyoolajiyadda dhismaha.
Marka, waxbarashadaada kadib, waxaad kasban doontaa Shahaadada Wadajirka ee Teknolojiyada Dhismaha.
Barnaamijku waa 100% khadka tooska ah wuxuuna kaa caawin karaa inaad qaadatid tallaabada ugu horreysa ee xagga xirfadda ee dhismaha iyo dhismaha ganacsiga fudud iyada oo loo marayo koorsooyin badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin; Hordhaca Teknolojiyada Dhismaha, Qalabka Dhismaha iyo Qaababka, Hordhaca Sawirrada Farsamada, Qorshaynta Dhismaha iyo Xakamaynta, Dhaqanka Dhismaha Cagaaran, Baadhista Aasaasiga ah iyo cabbiraadda, iyo inbadan.
Barnaamijku wuxuu ka kooban yahay afar semester iyo wadar ahaan 67 dhibcood.
Shuruudaha gelitaanka barnaamijkan waa kuwo fudud oo kaliya waxaad u baahan tahay waxyaabaha soo socda;
Dibloomada dugsiga sare ama GED oo leh ugu yaraan 2.0 GPA dugsiga sare
Aqoon ku filan fiisikiska iyo xisaabta ama xisaabta
Waxbariddu waa $ 79 halkii dhibic dhammaan semestarrada loogu talagalay dadka deggan gobolka gudihiisa iyo ardayda ka baxsan gobolka.
Jaamacadda Koonfurta Queensland
Jaamacadda Koonfurta Queensland waxay bixisaa shahaadada injineernimada madaniga ah ee 2 ee khadka tooska ah ee heerka wadajirka ah ee daraasadda iyada oo diiradda la saarayo Muhiimka ah ee Injineerada Madaniga ah.
Barnaamijku wuxuu leeyahay labadaba dhismaha iyo qaababka waxbarasho ee dibadda. Habka dibedda waxaa ku jira masaafada / barnaamijka barashada khadka tooska ah.
Koorsadu waxay kaa caawin doontaa inaad bilowdo xirfad ku saabsan injineernimada madaniga ah iyo inay ku baraan labadiinaba qaab wax ku ool ah iyo aragti ahaaneed oo lagu dejinayo jaranjaro lagu barto daraasad dheeraad ah.
Koorsooyinka muhiimka ah gudaheeda, waxaa lagugu qalabeyn doonaa xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin sida loo adeegsado falanqeyn wax ku ool ah iyo mabaadi'da farsamada dhammaan dhinacyada injineernimada madaniga ah.
Si loo dhammaystiro shahaadadan, ardaydu waa inay dhammaystiraan 16 cutub, daraasad waqti-buuxa ah waxaa lagu dhammaystiri doonaa 4 cutub xilli-dugsiyeedkiiba. Waxaa jira 3 simistar guud ahaan, sidaa darteed shahaadada waxaa lagu dhammeeyaa wax kayar 2 sano.
Shuruudda looga baahan yahay isdiiwaangalinta barnaamijkan waa aqoon durugsan oo ku saabsan Ingiriisiga iyo Xisaabta Guud oo u dhiganta heerka fasalka C ama ka sareeya ee Cutubyada 3 & 4 ee heerka dugsiga sare.
Codsadeyaasha sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay muujiyaan caddeynta aqoonta Ingiriisiga iyaga oo qaadanaya IELTS oo leh dhibcaha ugu yar ee 6.0 ama u dhigma.
Deganeyaasha gudaha ama ardayda guryaha ku nool - AUD 35280
Ardayda ka baxsan gobolka ama kuwa caalamiga ah - AUD 27920
Kuliyada Farsamada ee Waqooyiga Dhexe
Kulliyadda Farsamada ee Waqooyiga Dhexe waxay bixisaa 2 sano shahaadada injineernimada madaniga ah ee khadka tooska ah ee heerka daraasadda iyadoo xoogga la saarayo Teknolojiyada injineernimada madaniga ah.
Barnaamijku wuxuu ubaahanyahay 61-62 dhibcood si loo dhamaystiro waana barnaamijka ugufiican kuwa doonaya inay dhisaan jidadka, garoomada diyaaradaha, iyo inay keenaan xalal kale oo faa iidooyin leh mustaqbalka.
Manhajka waxaa lagu dhisay CAD, sahamin, iyo waayo-aragnimo dhab ah oo gacan-ku-qaadis ah si ardaydu ay si buuxda ugu karti yeeshaan adeegsiga dhammaan aaladaha muhiimka ah ayna awood ugu yeeshaan inay si hufan u taageeraan injineerrada madaniga ah bixinta mashaariicda si bulshada ay horay ugu socoto. mustaqbalka.
Codsadeyaasha doonaya inay iska diiwaangeliyaan barnaamijkan waa inay soo gudbiyaan mid ka mid ah kuwan soo socda;
Dibloomada dugsiga sare oo leh CGPA-da 2.5 ama wixii ka sareeya
ACT oo leh dhibcaha ugu yar ee 180 ama wixii ka sareeya
Qoraal Koolej ah oo ay la socoto CGPA-da 2.5 oo kayar ugu yaraan 12 dhibco oo aad ka kasbatay hal kulliyad.
Looma baahna inaad soo gudbiso dhammaan dukumintiyada kor lagu soo sheegay laakiin mid uun ka mid ah saddexda.
Lama heli karo
Ka kasbasho Associate of Degree Science Degree kulliyadda Penn College 2 sano shahaadada injineernimada internetka.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo maskaxdaada falanqaynta iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka laguna dabaqo shahaadada injineernimada.
Barashada waxa ay u baahan tahay si loo horumariyo kaabayaasha mustaqbalka, la shaqeynta naqshadeeyayaasha fuliya mashaariicda kaabayaasha sare sida buundooyinka, waddooyinka, iyo jidadka waaweyn.
Barnaamijku wuxuu ardayda siiyaa takhasus qoto dheer oo ku saabsan mowduucyo kala duwan sida Qalabka Dhismaha, Haydarooliga iyo Hydrology, Naqshadeynta Horumarinta Dhulka, Tirakoobka, Sahaminta, Wadada injineernimada, iyo inbadan.
Codsadeyaashu waa inay diiradda saaraan tacliinta adag ee ku saabsan halabuurka Ingiriisiga, aljabra iyo trigonometry, iyo tirakoobka.
Dadka ku nool gobolka - $ 587 saacaddii amaahda
Ardayda ka baxsan gobolka - $ 839 saacaddii amaahda
Ujeeddo muhiim ah oo ah bixinta waxbarasho heer-caalami ah iyo waxbarasho injineernimo Machadka Injineeriyada Teknolojiyada wuxuu bixiyaa shahaadada injineernimada ee sanadka 2 ee internetka.
Shahaadadu waa Master of Civil Engineering iyadoo diirada la saarayo Kaabayaasha Tareenka ee loogu talagalay in lagu qalabeeyo bartayaasha xirfadaha muhiimka ah, aqoonta, iyo farsamooyinka loo baahan yahay si wax looga qabto baahiyaha warshadaha injineernimada tareenka.
Kaliya ma baranaysid nooc kasta oo xirfad ah laakiin xirfado heer sare ah iyo xirfado farsamo oo kaa caawin kara inaad aasaasid xirfad ku yeelato kaabayaasha tareennada. Koorsada waxaa lagu dhammeeyaa sanadaha 2, ikhtiyaarka waxbarasho ee waqtiga-buuxa ah iyo 100% khadka tooska ah.
Barnaamijka Master of Civil Railway ee Kaabayaasha Dhaqaalaha wuxuu ubaahanyahay 48 dhibco dhibco oo ka kooban laba iyo toban cutub oo asaasi ah iyo hal kudhis. Waxaa jira afar teeram sanadkiiba, oo leh laba cutub xillikiiba.
Si loo helo gelitaanka barnaamijkan, codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay qabtaan;
Shahaadada bachelorka 3 ama 4-sano ee injineernimada jaamacad ama jaamacad la aqoonsan yahay
Imtixaan aqoon u leh luqadda Ingiriisiga ama IELTS oo leh dhibco dhan 6.0
Khidmadaha waxbarashadu way ku kala duwan yihiin waddan ahaan, si aad u hubiso taada u tag qaybta "Khidmadaha iyo Bixinta" ee Page oo ka xulo dalkaaga hoos-u-dhaca.
Jaamacadda Norwich waxay bixisaa 2 sano shahaadada injineernimada madaniga ah ee khadka tooska ah ee cilmiga sayniska.
Barnaamijka Masters-ka ee injineernimada madaniga ah waxaa loogu talagalay in lagu daro mabaadi'da injineernimada hadda iyo hababka ugu wanaagsan ee hoggaaminta.
Barnaamijku wuxuu leeyahay afar uruurin oo waaweyn oo ku saabsan Maareynta Dhismaha, Injineernimada Kheyraadka Deegaanka / Biyaha, injineernimada cilmiga dhulka, iyo injineernimada dhismaha.
Waxyaabahan uruurinta ah, waxaad kuheli doontaa aqoon sare injineer waxaadna hogaamiye u noqon doontaa bulshadaada, ururkaaga, iyo adduunka.
Looma baahna GRE / GMAT
Shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee maadada injineernimada ee ugu yaraan GPA ee 2.75 iyo wixii ka sareeya jaamacad la aqoonsan yahay.
Haddii Ingiriisku aanu ahayn luqaddaada koowaad, caddaynta aqoonta luqadda Ingiriisiga ayaa loo baahan yahay, tanna waxaa lagu samayn karaa saddex siyaabood;
TOEFL - dhibcaha ugu yar ee 550 (imtixaan ku saleysan warqad) ama 80 (imtixaan internet ku saleysan)
IELTS - dhibcaha ugu yar ee 6.5
Kharashka waxbarashada waa $ 808 saacaddii amaahda, iyo wadarta saacadda amaahdu waa 36.
Kuwani waa kuwa ugu sarreeya 2 sano ee shahaadada injineernimada madaniga ah barnaamijyada loogu talagalay in loogu baro ardayda barta cilmiga injineernimada. Barnaamijyada isku xidhka ah ayaa ku bari doona aasaaska aasaasiga ah ee injineernimada madaniga ah halka sayidyadu kaa dhigi doonaan khabiir ku takhasusay xirfadda.
12 Deeqaha Sare ee Imaaraadka ee loogu talagalay Ardayda Hindida ah
Koorsooyinka elektaroniga ee bilaashka ah ee 14 oo leh shahaadooyin
13 Deeq waxbarasho oo buuxda oo ay siisay Dowlada Kanada
17 Koorsooyinka Online-ka ee Bilaashka ah ee Jaamacadda Princeton
22 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin Boqortooyada Midowday
koorsooyinka interneedka wax ku barta internetka
Previous Post:19 Dugsiyada Cunnada ee ugu Fiican Kanada | Toronto, Ontario, iyo Alberta
Post Next:13 Deeqda waxbarasho ee ugufiican Dowlada Canada